Karaiba10 Janoary 2008
Zimbaboe : Tantsaha mitaky haloa amin'ny sandam-bola “Rand”
Zimbaboe10 Janoary 2008
Ny mpiblaogy Mugabe Mukaipa dia manapariaka vaovao izay navoaky ny gazety Zimbabwe Standard momba ireo Zimbaboeana izay mampiasa ny sandam-bola Afrikana Tatsimo : Villagers in most parts of Matabeleland are selling their livestock in South African Rand, citing the volatility of the Zimbabwean dollar whose value continues to tumble against...
Oganda: ifampitadiavana ny solika.
Oganda04 Janoary 2008
Kampala.ver no mampita vaovao avy any Oganda: “Raha ampitahaina amin'ny fahafatesa-na Kenyana anjatony dia mbola ambany ihany fiantraikan'ny fifidianana Kenyana namboamboarina ity fa ny iray litatry ny soliky ny fiara ihany no mba any ho any amin'ny USh 8,000.” Hampahafantarana antsika aloha fa nandalo ny seranana Kenyana ny solika Ogandey talohan'ny...
Karaiba04 Janoary 2008
Malawi: Mba tano re ny asa azo!
Malawi03 Janoary 2008
Manoro hevitra ny Malawita i Clement Nyirenda hoe : “Nahatonga saina ahy iny resadresaka iny satria nahafantarako fa be ny eto Malawi no mitady asa. Koa raha efa manana asa ianao, dia isaory Andriamanitra na dia kely aza ny karama fa tsy misy izao ny tsenan'asa.” Ndesanjo Macha